सपनामा बिरालो र माउसुली देखेमा अशुभ हुने, के संकेत गर्छ ? - Entertainment Khabar
सपनामा बिरालो र माउसुली देखेमा अशुभ हुने, के संकेत गर्छ ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, भाद्र ०१, २०७७ समय: ६:३०:१६
काठमाडौं – हामिले सुतेको समयमा सपना देख्ने गर्छौं । सपना कहिले राम्रो देखिन्छ त कहिले नराम्रो । हामिले सुतेपछि देखिने हरेक सपनाको अर्थ हुन्छ ।
धार्मिक मान्यता अनुसार आमिले जस्तो सपना देख्छौ त्यही अनुसार त्यस्तै फल पाउछौ । हामिले सपनामा देखिएका सबै चिज हाम्रो जीवनसँग जोडिएको हुन्छ । कुनै सपनाले भविष्यमा तपाईमाथि आइपर्ने खतराका पूर्व संकेत पनि गर्छ ।
त्यसैले सपनामा देखिएका कुराहरुको बारेमा जान्नु जरुरी हुन्छ । कहिलेकाही नसोचेको बस्तु, चिज सपनामा देखिन्छ । यदि तपाईले सपनामा माउसुली देखेमा के हुन्छ होला, यदि तपाईले सपनामा माउसुली देखेमा अशुभ मानिन्छ ।
सपनामा माउसुली देख्नु भएमा कुनै दुर्घटना हुने अथवा घरमा चोरी लगायतका घटना हुनसक्ने संकेत गर्ने बताइएको छ । त्यस्तै सपनामा बिरालो देखेमा पनि अशुभ मानिन्छ । सपनामा बिरालो देखिएमा भविष्यमा नै तपाईको कोहीसँग झगडा हुँदैछ भन्ने अर्थ लाग्ने बताइएको छ ।
सुप्रसिद्ध गीतकार विजय शिवाकोटीको ‘मेरो गीत मन पराउँछ्यौ’को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
काठमाडौं। गीतकार विजय शिवाकोटीको ‘मेरो गीत मन पराउँछ्यौ’ बोलको गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक दीपक खरेलको स्वर रहेको गीतमा ...
जनकपुर रेल सेवाको शुक्रबार परीक्षण गरियो। तर सर्वसाधारणले यो रेलमा चढ्न भने तत्कालै नपाउने भएका छन्। उनीहरुले रेल चढ्न अ...
बिएमसीले बंगलाको टुक्रा पारेको फोटो सेयर गर्दै कंगनाले भनिन्– मन्दिरलाई चिहान बनायो
भर्खरै मात्र बीएमसीले बलिउड अभिनेत्री कंगना रनौतको कार्यालय अवैध निर्माण गरेको भन्दै तोडफोड गरेको थियो । जुनबेला कंगना र...
सज्जन धामीको मेलोडियस गीत ‘आँखा गाजल’ रिलिज (भिडियो)
गायक सज्जन धामीको नयाँ मेलोडिसय गीत रिलिज भएको छ। शुक्रबार रिलिज भएको ‘आँखा गाजल’ बोलको गीतमा सज्जन धामीकै शब्द, संगीत अ...
जोकरबाट अब अभिनेता
कमेडी कलाकारलाइ सर्कसको जोकर जस्तै मानिन्थ्यो। तर, यतिखेर भने पासा पल्टिएको छ। तिनै जोकर भनिएकाहरु नभई फिल्म नचल्ने अवस्...
असोज ०३ गते शनिबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) – हड्डी, नशा र पेटका समस्या बढ्ने हुनाले खानपानमा एकदम नै सजक रहनु होला । गोपनिय...